घरेलु उपचार कति भरपर्दो ? | सुदुरपश्चिम खबर
घरेलु उपचार कति भरपर्दो ?
१. घरेलु उपचारले हानिकारक सुक्ष्म जीवाणुलाई मार्छ वा त्यसको बृद्धिलाई रोक्छ ।
२. कति हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुलाई जीवित राख्नका लागि अनुकूल वातावरण बन्न दिदैन ।
३. प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । शरीरको सूक्ष्म जीवाणुसँग लड्न सक्षम बनाउँछ ।
अहिले घरेलु उपचार विधीबारे सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ । विभिन्न वेबसाइट, फेसबुक, युट्युबमार्फत पनि कुन समस्यको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानकारी लिन सकिन्छ ।
– घरेलु उपचारको प्रयोग गर्नु वा तयार गर्नु सरल छ । कुनै विशेषज्ञताको आवश्यक्ता हुँदैन । जो कोहिले यसलाई तयार गर्न सक्छन् ।
–घरेलु उपचारको दुष्प्रभाव कम हुन्छ ।
– घरेलु उपचारमा यस्तो कुनै रसायन हुँदैन, जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ ।
–घरेलु उपचार सस्तो र सजिलै मिल्छ ।
– कतिपय रोगमा घरेलु उपचार अधिक प्रभावकारी हुन्छ ।
–एकै घरेलु उपचारले कति प्रकारका उपचार गर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार